Umgangatho ophezulu oBonakalayo oPhezulu oPhezulu oBonakalayo oPhezulu oPhezulu oPhezulu oPhezulu oPhezulu kunye nabaxhasi | Iwistron
IsiQinisekiso esiPhezulu esiBonakalayo seGlasi eyi-360
Umbala: Yonke imibala iyathandeka
Ubunzima: 500 ± 20g
Ubungakanani bobunzima: Iitoni ezingama-40 ngentla
Khulisa ukubonakaliswa kwemigca yokumakisha yendlela ngexesha lobusuku obunethayo okoko iiglasi ezincinci kwi-thermoplastic azibonisi kumanzi emvula.
Ukukhokela ukugcwala koohola bendlela okanye ijika ezingamagophe ebusuku ukongeza kwimigca yokumakisha ezindleleni, kunye nokubonelela ngendawo ekhuselekileyo yokubonakalayo. Amaso amancinci eglasi kwi-thermoplastic awela ngokulula; kungoko ukubonakaliswa kweendlela zokumakisha ezindleleni kuyehla kakhulu. Ukugqabhuka kuya kulumkisa abaqhubi xa betshintsha imizila
Izitadi ezomeleleyo zendlela yeglasi zisebenza ngokubonisa kwakhona. Ukukhanya okungenayo kubuyiselwe umva ngumbonisi we-retro kwicala elinye ngqo apho lavela khona, ngeedigri ezingama-360. Oku kubalulekile kutrafikhi, njengoko isibonakalisi sibonisa ukukhanya kwezithuthi ezivela ngapha nangapha kubasebenzisi bendlela, ezibakhokelayo okanye ezibothusayo kwiimeko ezahlukeneyo zezithuthi.
Imveliso Wobulali Glass Road Stud
Izinto eziphathekayo Iglasi yoBushushu boqobo
Inkangeleko Ujikeleze okanye ucwecwe phezulu
Ubunzima 500 ± 20 g
Ubunzima bomthamo Iitoni ezingama-40 ngentla
Umbala Yonke imibala iyathandeka
Ukupakisha Zipakishwe ibhokisi kuqala, kunye 24pcs / baseKapa
Ukusetyenziswa Uhola wendlela
Izitopu zeglasi eziqinileyo zilungele idolophu kunye neendawo ezisemaphandleni. Zisetyenziswa ngokubanzi kwicandelo leziseko zophuhliso, ukanti zikwakulungele kakhulu ukwakhiwa okanye ukuhonjiswa kwezicelo. Ngokucacileyo, zombini ezi njongo zinokufezekiswa kwisicelo esinye.
Iziteki zeglasi eziqinileyo zifakwe ngaphakathi kwendlela yokukhokelwa, isilumkiso kunye nolawulo lwezithuthi. Ababonakali nje ngokucacileyo ngongcwalazi nasebumnyameni, kodwa baqinisekisa ukubonakala okungcono komsebenzisi wendlela emini. Ngokukodwa ngokukhanya okuvela elangeni kunye / okanye kwimvula enkulu, izitrato zeglasi eziqinileyo zibonakala ngakumbi kunophawu lwendlela, kwaye oku kunyusa ukhuseleko lwezithuthi ngokubonakalayo. Imizekelo yezicelo zii-turbo roundabouts, iirves eziyingozi, iindlela zokuhamba okanye oohola bendlela, izikwere zikawonkewonke kunye neendawo zokupaka. Jonga imifanekiso engezantsi ukujonga ngokubanzi ezinye izicelo.
1. Akukho ndawo imfama kuyo nayiphi na ijika.
Isidanga 2.High yobulukhuni komhlaba kunye nesiliphu-ubungqina umphezulu; Ukubonakaliswa kunokuhlala ixesha elide kakhulu.
Amandla amakhulu kunye nokuhlala ixesha elide.
Inxalenye ephumayo yi-100% ebonakalayo.
Umphezulu 5.Smooth kwaye akukho lula ukuqokelela uthuli, olungafuneki kucocwa kunye nolondolozo.
Imveliso 6.Fully oluzenzekelayo ngoomatshini.
7.Ixesha lokuphila lingamaxesha ali-15 ubude kunommakishi weplastikhi wamatye eplastiki.
Iminyaka eyi-8.5 isiqinisekiso sinikezelwe ngoohola bendlela kwihlabathi liphela (ireyithi yokwaphula ingaphantsi kwe-5%).
Egqithileyo IAluminiyam Road Stud SD-RS-A3 (IAluminiyam Cat Eyes \_ Aluminium Road Road)
Okulandelayo: IPlastiki Road Stud SD-RS-P2
Iglasi eJonga ukuKhanya kweNdlela
Izitadi zeNdlela yeGlasi
Iglass yoMoya Solar Road Stud